3 European Cities Best Visited By Train | Save A Train
musha > Travel Europe > 3 European Cities Best Visited By Train
Kune vakawanda maguta dzakanaka Europe, uye chii zvakawanda, zviri nyore kuitira kuti tivashanyire zvose. Kufamba njanji ndiyo nzira huru kuona izvi mugomo-pasi dzokugara. Heano 3 maguta European zvakanakisisa akashanyira nechitima.
Tatanga maguta edu European zvakanakisisa akashanyira nechitima pamwe nhaka: kushandiswa, Bherujiyamu
Pane zvakawanda Belgium pane chete chokoreti. Bruges ndiyo inozivikanwa nokuva guta Canal, se Venice uye Amsterdam. Saizvozvo, guta rose iri UNESCO World Heritage Site. Kushanyira Bruges nechitima ipfungwa huru kubva Bruges chikuru kuchiteshi chechitima kunongova 10 maminitsi famba vachibva ose makuru kunotenga migwagwa uye 20 maminitsi kumusika yaiungana. Inopawo nezvitima kune mamwe maguta ose guru Bherujiyamu, uyewo diki, Furanzi, uye Thalys chitima Paris–kweBrussels-Ostend.
saka bhuku rako chitima tikiti tichinakirwa nzvimbo dzakanaka kushandiswa. Iva nechokwadi kuti vanakidzwe Mayo fries uye munharaunda doro.
For pamushana: Thiruvananthapuram, Speini
Unonzwa sei pamusoro mushana uye European maguta yakanakisisa akashanyira nechitima? Zvakadini Vakamupfekedza Andalucian nharaunda uye moorish akitekicha? Zvinonzwika zvakanaka? Ipapo Thiruvananthapuram ndechenyu.
Vafambi Most kufunga chitima rwendo kuenda kuSpain funga Barcelona kana Madrid, asi chaiye chindori nhema mberi kumaodzanyemba, mu pakukura chechina guta Spain raMwari.
Thiruvananthapuram zvaJehovha Santa Justa chiteshi chikamu kumhanya, -Mutsetse shanu Republic basa uye richibatanidza kuti 17 zvikuru Spanish maguta, saka hapana nzira iri nani kufamba pane nechitima.
Paunoshanya, nechokwadi iwe kushanyira mweya-achitora Church uye kuenda tapas rwokuparidza – unogona bhuku rine boka rakarongeka.
maguta European zvakanakisisa akashanyira nechitima Nokuti dzinoyevedza: Munich, Jerimani
Munich ari kunovhengana yakaisvonaka varipo itsva kwakafanana padzimbahwe BMW uye Allianz Arena uye nhoroondo nzvimbo yakafanana Nymphenburg Palace uye Munich Hofgarten ndosaka takamuisa kumaguta edu eEurope akashanyirwa nechitima.
Paaishanyira Germany nechitima, unogona kusvetukira muna Venice, vofamba Verona, Trento, uye Innsbruck, uye – Papera nomwe pemaawa – kuva Munich. Maonero achitevedza njanji vari mukare. Nzvimbo dzakanaka dzeItari gadzirisa nzira Alps uye ipapo Dolomites vasati vasvika muMunich.
Paunoshanya, nechokwadi kuedza vamwe ‘Munchner Weiswurst', soseji akashanda chichangobva kubikwa pretzels uye inotapira masitadhi. Geza pasi nemumwe famed Bavarian beers.
Ungasvika sei kumaguta eEurope zvakashanyirwa nechitima?
Uri akafuridzirwa kushanyira rimwe remaguta aya Vakamupfekedza European? maguta European zvakanakisisa akashanyira nechitima inogona wakawandirwa panguva yakanakisisa chitima matikiti mitengo pa Saveatrain.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F3-european-cities-best-visited-by-train%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Train Travel famba travelbelgium travelfrance travelspain